Ala | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Thuja n'ebe ọdịda anyanwụ "Brabant": ọdịda, ịhapụ, jiri nhazi ala
Thuja n'ebe ọdịda anyanwụ "Brabant" bụ otu n'ime ihe ndị dị n'ebe ọdịda anyanwụ nke ọdịda anyanwụ, nke a na-ahụ anya site n'ike ya ngwa ngwa, ogo ya ruru mita 20, okpueze ya dị elu dịkwa mita 4. akwụkwọ maka oyi. Okpueze nke thuja bụ kọmpat, nke nwere ike ịdaba, ọ nwere ike ịbanye n'ala, ụgbụ ahụ nwere uhie na-acha uhie uhie, nke na-emekarị ka ọ na-agba.
Otu esi etinye vermiculite maka osisi na-eto eto
Ọganihu ọ bụla nke ugbo ọ bụla na-adabere na ala ala. Ka oge na-aga, ihe onwunwe nke ala dị njọ - mmiri na ikuku permeability dara, ọ na-emegharị, na-esi ike. Mgbọrọgwụ adịghị ezuru ikuku na mmiri. Saa nri, mbelata ọmụmụ. N'aka nke ọzọ, mmeri nke ụwa na - emekarị mgbe ọ na - eme nri na - ejikọta ya na ịnweta nri, ihe nchịkọta nke a ma ọ bụ ihe ahụ nwere ike ime.
Ammonium nitrate: ot' esi tinye nri fatịlaịza
Ọ bụghị onye ọ bụla maara ammonium nitrate, ya mere ka anyị lebakwuo anya na fatịlaịza a, ma chọpụta otú na ebe ọ na-eji. Ammonium nitrate bụ granral mineral fatịlaịza nke na-acha ọcha na agba na agba ntụ, edo edo ma ọ bụ pink ndò, na a dayameta nke elu ruo millimeters. Amuma nkọwa na mejupụtara nke fatịlaịza Fatịlaịza a na-akpọ "ammonium nitrate" - ihe a na-ahụkarị n'etiti ndị na-ebi ndụ okpomọkụ, bụ nke chọpụtala ngwa ngwa maka ọnụnọ ya na ihe dịka 35% nitrogen, nke dị oké mkpa maka uto nke osisi.
Kedu ihe bụ hydrogel na otu esi etinye ya
Mgbe ịlaghachiri njem dị anya, ọtụtụ ndị na-eto eto na-eme ka ọnọdụ nke ụlọ ha dị n'ime ha maa jijiji, nke, ebe ọ na-enweghị mmiri mmiri, ghọọ nke herbarium. Iji zere nke a, ọ bụ naanị na-eto eto na mmiri jụrụ ga-enyere, nke anyị ga-atụle n'okpuru. Hydrogel: ihe ọ bụ Gịnị bụ mmiri mmiri, ọ bụghị mmadụ niile maara, ọ bụ ezie na n'afọ ndị na-adịbeghị anya, a na-agbasawanye ihe a n'etiti ndị ọrụ ubi.
Earthworms na ubi anyị: uru bara uru, ozuzu
Ọrụ nke earthworms na ọdịdị na na ndụ mmadụ na-esi ike ikpochapụ. Ogwurugwu nke di nma bu onye ozo di nkpa n'ime okike nke ala na-eme nri, ya mere ihe okike bu ihe ndi mmadu nwere. Ọ bụ ezie na anyị adịghị eche banyere ya mgbe niile, ma na-enweghị ụgbụ mmiri, anyị nwere ike ịdị mgbagwoju anya.
Atụmatụ nke iji peat dịka fatịlaịza
Na-arịwanye elu, ndị na-elekọta ubi na-ahọrọ iji nri fatịlaịza dị ka nri. Otu n'ime ha bụ peat. Otú ọ dị, mara na ọ gaghị adabara ala niile. Ee, ma mee ka fatịlaịza a bụrụ ihe amamihe dị na ya, ka ọ ghara imerụ osisi ma ọ bụ ala. Banyere ihe dị na peat, otú o si eme na otu esi etinye ya n'ọrụ n'ụzọ dị mma n'ụdị fatịlaịza n'ubi ubi, gụọ na ngalaba ndị na-esonụ.
Otu esi etinye "Azofosku" na dacha
Taa otu n'ime nri ndị a kachasị eji eme ihe na ugbo bu ọgwụ "Azofoska". Ogologo oge a ejirila fatịlaịza jupụtara na nnukwu ụlọ ọrụ ugbo na-emepụta ihe, ọ dịkwa mma na obere ụlọ azụ, atụmatụ mba. "Azofoska" - gini ka o bu?
Kedu esi tinye perlite na osisi
Nsogbu na-emekarị nke ndị na-elekọta ubi bụ ala dị oke ala, nke na-adịghị ekwe ka ikuku na mmiri, igbochi osisi sitere na mmepe. Agroperlite ga-abụ ezigbo nzọpụta maka ikpe dị otú ahụ, ihe onwunwe na ngwa nke anyị ga-atụle n'okpuru. Gịnị bụ perlite na àgwà ya bụ Perlite bụ ebe zuru oke na horticulture na ubi ugbo, n'ihi ya, onye ọ bụla kwesịrị ịma ihe ọ bụ.
Ụdị ịnweta nri ịnweta, aha na nkọwa
A na-eji nri ndị na-edozi ahụ emepụta nri dị elu. Ngwakọta nke ịnweta nri ịnweta nwere ike ịdị iche, na dabere na nri a chọrọ ka ọ dị mgbagwoju anya na dị mfe. Ọ dị mkpa! A ghaghị iji nri dị ntakịrị mee ihe, mgbe ị na-ahụ ọkwa nke ihe oriri na ala.
Usoro nhazi maka ala dị iche iche: ngwa na usoro onunu ogwu
Ala na mgbochi aka bụ usoro dị mkpa maka uto na mmepe nke osisi na, ya mere, iji nweta nnukwu ihe ubi. Fatịlaịza - nhazi nke bekee eji eji mma na ọnọdụ nke ala. Ha na-eri nri na osisi ndi ahu di mkpa. E nwere ụdị nri ndị a: organic na ịnweta (site na mmalite); siri ike na mmiri mmiri (ala nchịkọta); ihe na-eme ihe n'ezoghi oke (usoro omume); isi, ịgha mkpụrụ, nri, subsurface, elu (usoro mmeghe).
Mbadamba ihe na mkpa nke ala ala ubi na ubi
Kedu ihe bụ acidity nke ala na ubi ha, ọ bụghị ndị nwe ala maara. Ọtụtụ ndị furu efu mgbe ha na-ahụ mmebi okwu na-enweghị mgbagha nke pH na nọmba ọnụ ọgụgụ mgbe ọ gasịrị na nchịkọta nke ụlọ ahịa na-agwakọta. Ọ bụ ezie na n'eziokwu, ọ bụ ozi kachasị mkpa maka nhazi nke ịgha mkpụrụ kwesịrị ekwesị na ọdịnihu ihe ọkụkụ n'ọdịnihu.
Maka onye na-elekọta ubi na onye na-elekọta ubi, ihe kacha mkpa bụ ala nke ala ya. Ụdị ala dị iche iche dị iche iche site na njirimara ndị a: usoro; ikike ikuku; ụdị hygroscopicity; ike ọkụ; njupụta; acidity; saturation na micro na nnukwu igwe, organic. Ịmara ihe ubi banyere ụdị ala na àgwà ha ga-enye gị ohere ịhọrọ nri ndị kwesịrị ekwesị maka ịkọ ihe n'ubi ahụ, bulie nri ma mee atụmatụ usoro agrotechnological.
Esi kpochapu ala tupu akuku osisi
Disinfected mkpụrụ - a nkwa nke ike ike Ome nke seedlings. Ya mere, isi mmalite nke nkwadebe maka ịgha mkpụrụ. Nhazi nwere ike ịrụ site na ụzọ ndi mmadu ma ọ bụ tinye ọgwụ ma ọ bụ ihe ndị dị ndụ. Iji chọpụta ụdị nkà na ụzụ kwesịrị ekwesị maka saịtị gị, tụlee ụzọ kachasị, ọnụ ala na ụzọ dị irè.
Anyị na-eji agroperlite maka osisi na-eto eto
Enwere ike ichikota umu ohia na hotikoisho ngwa ngwa n'uwa ugbo ala, ma perlite ga enyere ndi dara ogbenye, n'ezie ebe ndi ekwesighi imeputa ihe ubi. Ọ bụ nke a na-eme ka ụba nri na mmiri na ụrọ na ájá ájá: mgbe ọ bụla e gosipụtara ha, ha dị iche iche na-emepụta ihe dị na ngwongwo na ngwọta.
Ejiji nke ihe eji ekpuchi ihe ndị dị n'ubi
Taa, ọtụtụ ndị na-elekọta ubi na-eji ihe dị iche iche na-ekpuchi ihe ndị ha na-eme. Ma, mmadụ ole na ole maara banyere ụlọ dị otú ahụ dị ka ihe na-agba agba, na ọbụna karị, mmadụ ole na ole ga-ekwu ihe ọ bụ ma kpọọ mpaghara nke ngwa ya. N'otu oge ahụ, oge anaghị eguzo ma ndị nrụpụta na-emeziwanye mma ngwaahịa, na-agbasawanye ohere nke iji ya.
Otu esi deoxidize ala: ntuziaka maka ndi oru ubi novice
Onye ọ bụla osisi grower, na-akụ na saịtị ọ bụla osisi, ọ bụrụ shrub, osisi ma ọ bụ ihe ubi, kwesịrị inyocha ọnọdụ nke ala. Ebe ọ bụ na ihe dị iche iche nwere ike ịmalite dị nnọọ iche n'otu mpaghara, nke a na-adabere ọ bụghị nanị na ala ala, kamakwa na acidity. Akwa dị elu nke acidity na-emetụtakwa ire ere nke nri dị iche iche na oxidizes na mgbọrọgwụ osisi, nke nke ahụ na-emetụta mmepe nke ọtụtụ kụrụ.
Otu esi egwu ala site na-ejegharị traktọ (video)
Motoblock ma ọ bụ obere-traktọ nwere ike ịghọ onye nnyemaaka dị mkpa maka onye ọrụ ugbo ọ bụla n'ala ala ya. Ọ dịghị achọ nnukwu mmanụ, na-ewe obere ohere, dị mfe ịrụ ọrụ, ma dozie ọtụtụ ọrụ dị mkpa, otu n'ime ha na-akọ ala. Obere, ọkara ma ọ bụ arọ? Iji mee ka ihe ubi na-arụ ọrụ nke ọma, ọ dị mkpa ịhọrọ ngwá ọrụ kwesịrị ekwesị.
Kedu otu esi achọpụta onwe gị ikpebi acidity nke ala na saịtị ahụ
Tupu ịkọ osisi ma ọ bụ osisi, ọ dị mkpa iji nyochaa ala nke kachasị mma maka ha. N'isiokwu anyị, anyị ga-akọwa otú ị ga - esi chọpụta ihe acidity nke ala ahụ na - enweghị onwe ya, ebe ọ bụ na egosi na enwe mmetụta dị oke mkpa na mmepe nke ihe ọkụkụ. Ụdị acidity The acidity nke ụwa bụ otu n'ime ihe ndị dị mkpa na nyocha nke ala.
Usoro na ụzọ nke isi tillage
Ndị ọrụ ugbo, dị ka ndị nwere nnukwu atụmatụ, nwere ọtụtụ nchekasị. Na mgbakwunye na ịgha mkpụrụ na nlekọta ihe ubi, ha na-agbalikwa ịnọgide na-ahụ ala n'ime ọnọdụ "kachasị mma". Iji mezuo nke a, ịkwesịrị ịma ihe niile gbasara nhazi ya. Tụlee ihe ndị e ji eme ihe n'ubi, na otú ha si dị iche na ibe ha.
Ụkpụrụ nchịkọta maka ịkwadebe ala maka seedlings. Kedu ihe dị mma karịa ịzụ ma ọ bụ arụrụ ụlọ?
Ala a kwadebere n'ụzọ kwesịrị ekwesị bụ ihe dị mkpa dị mkpa maka ọganihu na mmepe nke ogige ndụ gị na ubi a kụrụ n'ubi. Otú ọ dị, ọ ghaghị iburu n'uche na osisi dị iche iche chọrọ ụdị ala dị iche, nke jikọtara ya na ọdịiche dị iche iche nke ogo ha na atụmatụ ha. Isiokwu a ga - enyere gị aka ịchọpụta otú ị ga - esi jiri aka gị mee ala ahụ maka ụdị dị iche iche nke seedlings.
Ịkọ ala: iwu ọrụ
Ịkụpụta osisi ndị a kụrụ n'ubi iji nweta owuwe ihe ubi gụnyere itinyeghachi usoro ụfọdụ iji meziwanye arụmọrụ kwa afọ. Usoro ndị dị otú a gụnyere ịkụ ihe, nri dị iche iche, ịkwadebe osisi na ala maka oyiing, ịkọ ala na ọtụtụ ndị ọzọ. Otú ọ dị, ọganihu adịghị eguzo, ndị injinia nke oge a ewepụtala ọtụtụ teknụzụ na ngwaọrụ ndị nwere ike ịkwado usoro a maka onye na-elekọta ubi.
Atụmatụ nke ịkụ mkpụrụ nke pasili
Olee otu esi emeso na otu esi eche nsogbu pests na tomato
Turkey ọrịa: ihe ịrịba ama na ọgwụgwọ
Utu "Ihe omuma": ihe di iche iche, uru na ntu
"Kaadị azụmahịa" nke ọ bụla na-elekọta ubi - Amirkhan mkpụrụ vaịn